Qaababka Qaaliga ah ee Isticmaala Istaraatiijiyadda Waxqabadka Qiimaha. | vfxAlert official blog
Ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah waa mid fudud: Qaabka Waxqabadka Qiimaha
Ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah wuxuu sii wadaa inuu caan ka noqdo ganacsatada bilowga ah, iyo ugu horreyntii, wuxuu ku xiran yahay fudeydka dibadda ee ganacsiga: terminaalka ganacsiga iyada oo aan la dhisin naqshadeynta isku dhafan ee adag iyo tilmaamayaasha, badhannada waaweyn "CALL / PUT" waxay abuurayaan dhalanteed aan ku habbooneyn falanqaynta farsamada iyo aqoonta suuqa.
Laakiin khasaarihii ugu horreeyay ee deebaajiga wuxuu dhigayaa wax walba meeshiisa isla markaana fahamku wuxuu yimaadaa in qofku uusan sameyn karin la'aanteed aragtida ah sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah . Qodobkaan, waxaan ku tusi doonaa qaababka faa'iidada leh ee adeegsada istiraatiijiyadda Waxqabadka Qiimaha.
Taariikhdu way soo noqnoqotaa iyadoo la kaashanayo qaababka garaafka, waxaa suurtagal ah in la saadaaliyo ficilada inta badan ciyaartooyda saamileyda ah (Eder's Chaos Theory, Elliott's mood wave).
Waa maxay Waxqabadka Qiimaha?
In kasta oo ay jiraan qalab iyo istiraatiijiyad kala duwan oo adeegsanaya falanqaynta farsamada, haddana dhammaantood waxay falanqeeyaan xogta qiimaha taariikheed, natiijadaasna, waxay had iyo jeer dib u dhac ku yimaadaa dhaqdhaqaaqa suuqa ee hadda jira. Suuragal maaha in gebi ahaanba laga saaro dib-u-dhaca, beddelkeedana, istiraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo aan tilmaam lahayn, sida Qiimaha Waxqabadka, ayaa la sameeyay.
Way ku adkaan kartaa bilowga inay fahmaan halka falanqaynta laambaddu ku dhammaato iyo ganacsiga Waxqabadka Qiimaha uu bilaabmayo. Xaqiiqadani way fududahay in la fahmo, iyada oo la ogyahay in mabda'a aasaasiga ah ee labada hababba ay isku mid yihiin: sicirka hadda jira waxaa ku jira dhamaan qodobada saamaynta ku leh, loomana baahna aalado falanqayn dheeraad ah.
Labada qaabba waxaan kula dhaqmeynaa qaabab isku mid ah: "saddexagal", "garbaha madaxa", "labalaab sare / labalaab hoose" iyo kuwo kale. In kasta oo "la'aanta tilmaamayaal" waayo-aragnimadii adeegsiga Qiimaha Waxqabadka ay muujisay iyada oo aan la helin tilmaamayaal dheeri ah: mugga, xad dhaafka / badbinta, celceliska dhaqdhaqaaqa ama calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ah ma sameyn karaan.
Dhibaatada kale ee Waxqabadka Qiimaha waa adeegsiga magacyada saxda ah: isku-darka laambadda waxaa loo yaqaannaa qaab-dhismeedyo, iyo qaabka "tweezers" -ka caadiga ah ayaa ka muuqda ereyga Double High.
Naqshadahooda waxaa loo isticmaalaa, tusaale ahaan, istiraatiijiyadda "1-2-3" iyo amaahda qarsoon: khadadka iska caabbinta / taageerada ee lagu dhisay sicirka Waxqabadka Qiimaha ayaa had iyo jeer u dhow kordhin iyo sixitaan heerarka Fibonacci ah.
Aynu si cad u qeexno: Waxqabadka Qiimaha wuxuu ka duwan yahay istiraatiijiyadda caadiga ah ee ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah ee horumarinta qoto dheer ee habka loogu adeegsanayo qaababka garaafka caadiga ah suuqa dhabta ah .
Gaar ahaan marka laga hadlayo ka shaqaynta tirooyinka aan dhammaystirnayn, maaddaama qaab-dhismeedka aasaasiga ah ee lagu sharraxay buugaagta qaab aan isbeddel lahayn ay ku yar tahay jaantuska.
Qaababka xulashooyinka aasaasiga ah
Dhammaan qaababka Waxqabadka Qiimaha, sida falanqaynta shumaca caadiga ah, waxaa loo qaybin karaa laba kooxood: dib u noqoshada iyo dhammaadka / sii wadida isbeddelka. Waxyaabaha ku saabsan ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah, moodooyinka dib-u-noqoshada waxay u shaqeeyaan si wax ku ool ah, badanaa waxay ku dhacaan meelaha laga noqdo isbeddelka isbeddelka ama bilowga qiimaha qoto dheer ee soo noqoshada.
Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad si sax ah u go'aamiso taariikhda dhicitaanka (dhicitaanka) ee ikhtiyaarka, taas oo aad muhiim ugu ah ganacsiga guuleysta. Aynu si dhow u eegno seddex qaab oo si fudud looga heli karo jaantuska xitaa kuwa bilowga ah:
• “Baarka Pin”;
• “Gudaha Bar”;
• “Baarka Banaanka”.
Magaca labaad ee ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah waa "Pinocchio bar". Waxay ku shaqeysaa wakhti kasta laga bilaabo maalinta (D1) ilaa 15 daqiiqo (M15). Setup ayaa magaceeda ku helay nooca astaamaha ah ee shumaca dhexdhexaadka ah ee jirka ka maqan ama yar iyo hooska weyn - "sanka" oo kolba haddii uu sii dheeraado, ayay u badan tahay ixtimaalka u soo noqoshada dhow ee isbeddelku. Qaab dhismeedka aasaasiga ah ee pin-bar:
Shumaca dhexe waa inuu buuxiyaa shuruudaha:
1. Jirka shumaca iyo qiimaha Hoose / Sare waa ku qasban yihiin gudaha “isha” bidix;
2. Dhererka jirku kama badna 20% “sanka”;
Waxaan fureynaa heshiis ka dib markii aan xirnay shumaca "isha" midig: xamil - DHIGAA inuu dhaco, halka bullaacadda - WAC si loo kordhiyo. Muddada ugu yar ee dhicistu waa 3-5 shumacyo iyo 5-7 oo gaagaaban. Intaa waxaa sii dheer, tixgeliyaan isbeddelka hadda jira ee qalabka ganacsiga.
Tusaalooyinka "Pin-bar" ee meheradda laba-geesoodka ah:
Sida dhammaan qaababka garaafyada ee baararka pin qaabkiisa ugu fiican lama helo, in kasta oo isku-darka shumacyada si la mid ah iyaga la mid yihiin ay dhacaan marar badan ganacsadahana waa inuu barto inuu ku dhaqmo kiisaska "aan dhammaystirnayn". Kahor furitaanka ikhtiyaar, hubi waxyaabaha soo socda:
Baarka loo yaqaan 'pin-bar' wuxuu ku yaal meel u dhow heerarka Fibonacci, kuwa maxalliga ah, kuwa maalinlaha ah iyo kuwa toddobaadlaha ah, hooseeya, celceliska dhaqdhaqaaqa iyo khadadka isbeddelka;
Hooska sare iyo hoose ee "indhaha" ayaa aad uga gaaban "sanka";
Shumaca dhexe wuxuu leeyahay hoos gaaban oo labaad ama waa la waayey.
Laba calaamadood oo ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo been abuur ah iyo mid aan fiicnayn:
Shumaca hore wuxuu si buuxda u nuugaa midka hadda jira, oo ay ku jiraan hooska sida sawirka ka muuqata:
Noocyada waxqabadka sicirka ee ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee shaxanka ayaa si dhif ah loogu sameeyay qaabkooda caadiga ah iyo baarka gudaha waa mid aan ka reebanayn: ugu badnaan / daqiiqadoodu badanaa waxay ka gudbaan barxaddii hore ama calaamadda.
La wareegitaankan qayb ahaan istiraatiijiyadda ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa sidoo kale loo tixgeliyaa calaamad muujinaysa furitaanka ikhtiyaar, laakiin kalsooni yar. Calaamadaha gudaha ayaa muujinaya in hubin la'aani ka jirto suuqa isla markaana isbeddelku ku dhammaan karo ama dib u bilaabi karo si siman ka dib guri gaaban ama hagaajin. Inta badan calaamadaha la isku halleyn karo waxaa la sameeyaa waqtiga maalinlaha ah (D1), laakiin natiijooyin wanaagsan ayaa laga helaa inta u dhexeysa H1-H4. Joogitaanka dhowr shumacyo gudaha calaamadda ayaa muujineysa ixtimaal sare oo isbeddellada qiimaha fiiqan.
Furitaanka macaamil ganacsi, waxaan fiiro gaar ah u leenahay arrimaha soo socda:
Laguguma talin inaad furto xulashooyinka markaad aragto bar gudaha ah oo ku taal barta isbeddelka suurtogalka ah. Tani dhif ayey keentaa isbeddel isbeddel xoog leh oo ay adkaato in la go'aamiyo muddada xulashada. Way ka kalsooni badan tahay in la furo heshiis barta sii socoshada isbeddelka;
Joogitaanka "barta muhiimka ah" ee Barta Gudaheeda: Saxida Fibonacci ama iska caabin / taageero, xariiqa isbeddelka, celceliska socodka;
Dhamaadka ugu yaraan 3-5 shumacyo.
Baararka gudaha / Dibedda ee jaantuska:
Baarka ka baxsan
Soo horjeeda A hannaankii ay u bar gudaha - shumac hadda si buuxda u nuuga mid hore oo ay la socdaan hadh ay. Haddii minima ama maxima labada shumac ay isku soo beegmaan, tan waxaa sidoo kale loo tarjumi karaa inay tahay bar ka baxsan:
Sida qaabkii hore, nuugistu waxay muujineysaa isku qiimo ahaanta dhaqdhaqaaqa qiimaha kor iyo hoosba. Barashada sida calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ay u shaqeeyaan had iyo jeer xusuusnow daqiiqadda hubin la'aanta suuqa waxaa inta badan ka horreeya ficillada mala-awaalka ee ciyaartoy waaweyn, kuwaas oo diiwaangeliya faa'iidooyinka / khasaaraha hadda jira iyada oo loo marayo isbeddellada qiimaha adag ee muddada-gaaban isla markaana ka kaxeynaya ciyaartoy yaryar suuqa:
Bullish dibedda baarka . Xiritaanka hadda ee kor ku xusan ee Sare ee shumacii hore wuxuu horseedaa xiritaanka amarrada iibsiga ee BUY ee Forex haddii shumaca uu ka hooseeyo kii hore hoose wuxuu ka saarayaa amarrada Joojinta Khasaaraha ee suuqa iyo ganacsatada sugaya dib u soo noqoshada ganacsiga hoos u dhaca waxaa ku dhaca khasaaro;
Baarka banaanka ka saar. Xaaladda ayaa ka soo horjeedda qulqulatada: inta la sugayo amarrada iibka iyo Joojinta Khasaaraha iibsiyada waa la xiray: ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ah ayaa muujinaya calaamadaha-CALL
Baararka bannaanka ugu kalsoonida badan waxaa lagu sameeyay waqtiyada laga soo qaado H1 iyo in ka badan. Si aad uga booddo "gariir" muddo-gaaban ah ee suuqa, halkaas oo la wareegidyaashu inta badan dhacaan ka hor intaanay isbeddelku dib u bilaabin, fur ikhtiyaarka kaliya ka dib marka la xaqiijiyo isbeddelka shumaca 2-3 .
Aan soo koobno . Saddexda qaab waxay tixgeliyeen inay siinayaan ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo la isku halleyn karo oo ku saabsan hanti kasta oo ganacsi. Intaa waxaa sii dheer, wali waxaa jira noocyo moodooyin rogaal celis ah, sida "Rails" laakiin iyagu si aad ah ayaa loogu adeegsan karaa oo keliya ganacsiga suuqa saamiyada.